Taunggyi - The Cherry Land: ကမ္ဘောဇနယ်နှင့် ကျွန်တော်မန္တလေးသား
Website | ကြေငြာချက် | Contact | Forum | MailBox
MCPA (Shan State)
- တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ Forum ၌ ၀င်ရောက်ရေးသားဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါသည်။ More>>
- ကိုယ်ပိုင်နာမည်နှင့် user@taunggyicherryland.com Email Address တစ်ခု ရယူနိုင် ပါသည်။
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ၂၀၀၈ (44)
ထိုင်လို့ ကောင်းသော ဆိုင်များ (8)
ICT Exhibition (5)
ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲ (၂၀၀၈) (2)
one of unforgettable day in Taunggyi (1)
Live Authors List
+ 68882 Since6June 2007
ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော် တောင်ကြီးကို (၁၉၉၄) လောက်က မန္တလေးသားကျွန်တော် တစ်ခေါက်ပဲ မှတ်မှတ်ရရ ရောက်ဖူးပါတယ်။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း မိသားစု နှစ်စုနဲ့အတူ ဒိုင်နာကားကြီး တစ်စီးနဲ့ တောင်ကြီး၊ အင်းလေး၊ ပင်းတယနဲ့ ကုံလုံကို ခြေဆန့်ခဲ့ကြတယ်။
ပင်းတယက ပဲပုပ်ကင်နဲ့ ကောက်ညှင်းလက်ဖက်ခြောက် ခပ်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းရဲ့ အရသာကို ခုထက်ထိ မှတ်မိနေဆဲပါ။ တောင်ကြီးကို ရောက်တဲ့အချိန်က ညနေစောင်း မိုးချုပ်ခါနီးအချိန် ဖြစ်တယ်။ တောင်ပေါ် ဒေသမို့ အေးစိမ့်စိမ့် ခံစားရတယ်။ ပါလာတဲ့ ဗီဒီယိုကင်မရာ ပျက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကင်မရာပြင်ဆိုင်တွေကို လိုက်ရှာရင်း ရုပ်ရှင်ရုံရှိရာ မြို့လယ်လမ်းမတွေကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံအောက်မှာ မြေပဲလှော်၊ နေကြာစေ့လှော်တွေ ရောင်းနေတာတွေ့တော့ မန္တလေးသား ကျွန်တော့်အတွက် အထူးအဆန်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမှာတော့ မြေပဲပြုပ်ပဲ ရောင်းပါတယ်။ ကင်မရာတော့ ပြင်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။
တောင်ကြီးကအထွက် အမေ့ကို "ဒါပြီးရင် ဘယ်သွားမလို့လဲ မေးတော့" "အင်းလေး၊ ဖောင်တော်ဦးဘုရား၊ ၀က်သားကင်နဲ့ ခေါင်တိုင် ရေပူစမ်းပေါ့" တဲ့။ ကျွန်တော်က "၀က်သားကင် စားချင်လိုက်တာ" လို့ ပြန်ပြောတော့ အမေကဆူတယ်။ ၀က်သားကင်ဆိုတာ အင်းလေးဒေသမှာရှိတဲ့ သက်သတ်လွတ် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆိုတာ နောက်မှ ကျွန်တော် သိလိုက်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နာမည်ကြီး အင်းလေးကို ကျွန်တော်တို့ ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ အင်းလေးက ရေပေါ် ကျွန်းမျောတွေက ကျွန်တော်အတွက် အံ့သြစရာပေါ့။ ဖောင်တော်ဦး ဘုရားဖူးပြီး ဘုရားဈေးတန်းမှာ အင်းလေး အင်္ကျီတွေကြည့်၊ ရှမ်း အင်းသား အစားအသောက်တွေကို စားသောက် ခဲ့ကြတယ်။ ငါးထမင်းချဉ်၊ ၀က်သားချဉ်၊ ဂျူးမြစ်၊ ပဲပုပ်ကြော်နဲ့ ငရုတ်သီးထောင်းကြော်တို့ရဲ့ အရသာက ကျွန်တော့်တစ်သက် မမေ့ဖွယ်ရာပါပဲ။
ခေါင်တိုင် ရေပူစမ်းဟာ အရင်က လူရည်ချွန်တွေ လာပြီး စခန်းချ အပန်းဖြေတဲ့ နေရာလို့ အဖေကပြောတယ်။
ရေပူစမ်းမှာ ရေချိုးကြတော့ ပူလိုက်၊ အေးလိုက် ရေကြောင့် အစ်မတစ်ယောက် မူးလဲသွားဖူးတယ်။ ကုံလုံမှာ ရောက်ရောက်ချင်း ထမင်းစားရတယ်။ ထမင်းစားခန်းဟောကြီးထဲကို ၀င်သွားပြီးတော့ သက်သတ်လွတ် ဟင်းရည်၊ ငရုတ်သီးခြောက်ကြော်၊ သီးစုံချက်တွေကို ဆာဆာနဲ့ စားခဲ့ရတယ်။
တောင်ကြီးကို မရောက်တာ အခုဆိုရင် ဆယ်စုနှစ် ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အခွင့်ကြုံရင် တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်နဲ့ ညောင်ရွှေဘုရားပွဲကို တစ်ခေါက်တစ်ခါတော့ ရောက်အောင် သွားချင်ပါသေးတယ်။ ရှမ်းအိုးစည်သံတွေ နားထောင်ရင်း၊ ဒေသအစားအစာတွေကို စားရင်း၊ ၀ဲတဲတဲအသံနဲ့ စကားပြောတတ်တဲ့ ပါးအို့နီနီ ရှမ်းမလေး တွေကိုလည်း ငေးချင်ပါသေးတယ်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 1:14:00 PM
Patek Philippe and Rolex consistently appear to apperception if top dollar watches appear up in conversation. Examples that were beat alone on break and in excellent or abutting to excellent condition, of course, accompany thealot of money. Watches with provenance--examples endemic by celebrities or rolex replica fabricated especially for acclaimed individuals--always accept added amount if replica watches uk they appear with adapted documentation.With that said, in her book Vintage Wristwatches (Krause Publications), above Antiques Roadshow adjudicator Reyne Haynes (who now goes by the name Reyne Hirsch) credibility out, "Much like affairsarolex replica watches monogrammed section of argent collectors generally don't wish anyone else's name, business affiliation, marriage anniversary.
Friday, October 21, 2016 8:13:00 AM
Sunday, January 22, 2017 2:27:00 PM
If someone isn't able to see myanmar fonts at our blog, pls download and install the following Unicode Fonts.
Zawgyi Myanmar Unicode Blogday Version (1.62 MB)
Taunggyi cherryland တွင် ၀င်ရောက် ရေးသားလိုသော မည်သူမဆိုကို လှိုက်လဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ Blog သို့ လာရောက် လည်ပတ်ကြ သူများကိုလဲ Taunggyi cherryland မှ လေးနက်စွာ ကျေးဇူးတင် ပါသည်။
တောင်ကြီးမှ Recording Studio များ
black match (or) စနစ်ကြိုး
1st ICT Exhibition 2007 Shan State
ယနေ့ ICT နှင့်တောင်ကြီး
Disney Fried Chicken and Noddle
ရှမ်းပြည်နယ် သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်- ပြပွဲ...
The Zoo of Taunggyi
Taunggyi at the Third Wave
ဥဏ္ဏလုံမွေရှင်တော် စေတီ၊ သဘာဝလှိုင်ဂူဘုရား (၁)
ဥဏ္ဏလုံမွေရှင်တော် စေတီ၊ သဘာဝလှိုင်ဂူဘုရား
ဘုရားအမှတ်စဉ်- ၆၆၄ အပိုင်း (၂)
ကျွန်မ ဂုဏ်ယူမိသော ကျွန်မတို့၏မြို့
တောင်ကြီးမြို့ရှိစေတီများအကြောင်း အပိုင်း (၁)
တန်ဆောင်တိုင် ၊ ၁၁ ယောက်နှင့် ကိုဟန်ကြည်ပျောက်တဲ့ည
ဘုရားအမှတ်စဉ်- ၆၆၄ အပိုင်း (၁)
တောင်ကြီး ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်
မုံတ၀ဂူသို့ တစ်ခေါက် (၄)
တောင်ကြီး မှ မွေတော်ကက္ကူဘုရားသို့..
အထက(၂) ကျောင်းသား/သူ ဟောင်းများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆင်...
တောင်ကြီးမြို့  မှ အဆိုတော်များ (၃)
တောင်ကြီး တက္ကသိုလ် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့ နှင်းသဘင်
ငါ = လူသား
ပြိုင်ပွဲဝင်မီးပုံပျံပြုလုပ်ပုံ အပိုင်း (၂)
Year 2008 © Taunggyi- The Cherry Land